April 2017 - Page 12 of 12 - Puntland Mirror Believable Media Website
April 1, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Washington-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 92 qof ayaa ku dhimatay roobab daad wata oo ka da’ay koonfurta-galbeed ee dalka Columbia, sida ay sheegtay Laanqayrta Cas. In ka badan 100 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay […]
April 1, 2017 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa u safri doona dalka Isutaga Imaaraatka Carabta inta lagu guda jiro asbuucaan, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan dowladda. Madaxweyne Cabdiweli ayaa la filayaa in uu saxiixo heshiis […]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland’s President Abdiweli Mohamed will travel to UAE during this week, according to the government sources. President Abdiweli is expected to sign an agreement with the DP World to develop and manage Bosaso […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Haayada waddooyinka Puntland ee PHA ayaa maanta oo Sabti ah si rasmi ah ugu saxiixday shirkad la dhaho Isxilqaan oo ku guulaysatay tartankii qandaraaska mashruuca dhismaha jidka isku xira magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo. […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s Interior Minister Abdi Farah Saeed also known as “Juha” officially took over the Ministry of interior and federal affairs on Saturday in Mogadishu. In the handover ceremony, the new Minister of Interior, […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka cusub ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid sidoo kale loo yaqaan “Juxa” ayaa maanta oo Sabti ah si rasmi ah ula wareegay xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. Wasiirka […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Saahid Maxamuud Cali ayaa galabta loo doortay duq degmada Gaalkacyo. Saahid oo ah nin dhalinyaro ah ayaa helay 23 cod halka ninkii ugu dhawaa ee la tartamayay Cabdiqani Diiriye Dhageweyne uu helay 7 [...]